Ukulondolozwa Kwemilayezo - Ukubalwa kwe-Kingdom
Category Archives: Imilayezo
Sijoyine ngoLwesibili, ngoJuni 15! I-Livestream Flame of Love Rosary.
UMichael ubiza uSuku Lomkhuleko Lomhlaba Wonke
I-Providence izofika ivela kuzo zonke izinhlangothi.
USimona - Dala iziqubulo zomthandazo
Fundisa izingane ukuthandaza-ziyikusasa.
Angela - UJesu Wafika Wazokhonza
Umbono wokuvikelwa kweNkosikazi Yethu phezu kweSonto.
IValeria - Ubungcwele Kusho Ukusindiswa!
UGisella - Ngikudonsela Ndawonye
… Ukuze silwe impi yokugcina.
Umphefumulo waseCalifornia - Mediatrix yoMusa
Ngiyindlela eya eNdleleni.
Pedro - Ngisho Nosizini
… Fakaza ukuthi ungokaJehova.
Ngabe siyazibona zenzeka manje ngesikhathi sangempela?
1 2 3 4 5 6 ... 79 Okulandelayo »